Chinozivikanwa Happy Bunny
9 mwedzi 4 mazuva apfuura #1118 by Old John
Sezvo zita rangu rekushandisa rinoratidza kuti ndiri pamusoro pe 60. Yangu chaiyo yehuvhuti ruzivo rwakave rwakare kare mu Chipmunk uye Vickers Varsity. Ndakatanga ndege yeimwe ndege makore gumi nemana akapfuura neFS yemakore zana ekubhururuka uye pc kubva kuPC pasi. Kwemakore ndakapedza mari yakawanda pane software uye hardware, ndichiedza nekusingaperi kwechokwadi. Ini zvino ndava nepamusoro pepakati pepakati PC kubva kuChillblast. Oculus VR uye nzvimbo ye orbx. My pc yakatengwa July 16 uye yakasvika neWindows 2017. Ini ndozoisa FSX Steam in. Zvose izvi zvave zviri mukutsvaga kubhururuka imwe ndege. The Douglas DC10. Imwe Ndege Ndeye Ndege Ndeye Ndege inenge yakakwana, sezvo ndinorarama muLisolinshire kwete kure ne RAF Coningsby uye Hondo yeBritain Memorial Flight uye Dakota ZA3. Ini ndiriwo mushanyi wenguva dzose kuDuxford zvose munyika chaiye uye nyika ye siming. Pane chimwe chinhu chakanaka chine mahwendefa ane chinyorwa chekuona-mhepo kuitira kuti ndinokwanisa kubhururuka pamwe chete nenhare inobhururuka 'Sally B'. Zvose zvakanaka munyika yangu asi pano zvinouya big bang. FSX Steam yakasarudza kuti ingadai isina kutamba zvakanaka neWindows 947. Saka ndaifanira kutema bullet uye shandura kuP10D V3. Pano panouya Nheyo dzeNyaya dzeHothanho DC4 dzisingatori muP3D. Uyewo hazvizobatsiri Duxford. Saka kuwana C3 yako ndeye absolute godsend. Izvo zvakakwana, ndinofanira kuziva sezvandakambopinda muD Dakota chaiye. Zvakanaka hauna kunhuwa. Asi sezviri pedyo neiko chaiyo semam inogona kuwana. Kuzvidza kwangu chete, hakuna niggles, inzwi kana kusakwanisa kwekugadzirisa uye maputi emapumpu uye kudanidzira kunze. Ndinobhururuka paratrooper uye ndingadai ndakaifarira mumavara RAF. Gore rinotevera munyika chaiyo pachave neDaks pamusoro peNormandy ichidonha parachutisheni paNormandy kuendesa nzvimbo. Ini ndichangove ndiri kubhururuka mhando yemhando. Iniwo ndine tariro yekuenda rwendo muDadota. Asi zvakare tinokutendai nokuda kweiyo dakota yeDakota iyo yandingadai ndakabhadhara nomufaro.
9 mwedzi 3 mazuva apfuura #1119 by rikoooo
Ndinokutendai nokuda kwekutaura kwako kwakanaka. Isu tinofara kuti unogona kubhururuka C47 pasina dambudziko. Kugamuchirwa kumusangano.